iOS 15 sy iPadOS 15: Izay rehetra tokony ho fantatrao manavao | Vaovao IPhone
Eto ny IOS 15 sy iPadOS 15, io ihany no tokony ho fantatrao alohan'ny hanavaozana
Miguel Hernandez | 20/09/2021 18:55 | iOS, iOS 15, iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Nampitandrina ny orinasa Cupertino nandritra ny Keynote farany teo izay ankoatra ny zavatra hafa nahitantsika ny fanombohana ny iPhone 13 vaovao momba ny fahatongavan'ilay rafi-pitantanana finday vaovao ho an'ny iPhone sy ny iPad, dia mazava fa miresaka momba ny iOS 15 sy iPadOS 15 isika.
Ny kinova farany an'ny iOS sy iPadOS dia misy fampiasa vaovao vitsivitsy ary ankehitriny dia azo sintonina sy apetraka. Manararaotra mampatsiahy anao ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ireo fitaovantsika havaozina foana izahay mba hiarovana ny fiainantsika manokana sy hialana amin'ny karazana malware. Raha niandry ny iOS 15 ianao, dia tonga ny fotoana handraisana ny dingana.
1 Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 15
1.1 FaceTime sy SharePlay
1.2 Safari nohavaozina sy mampiady hevitra
1.3 Ny sarintany sy ny toetrandro dia nohavaozina
1.4 Fomba fampifantohana sy fampisehoana mazava kokoa
1.5 Vaovao kely hafa
2 Ny vaovao rehetra ao amin'ny iPadOS 15
3 Fitaovana inona avy no hanavao ny iOS 15 sy iPadOS15?
4 Ahoana ny fanavaozana ny iOS 15
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 15
Voalohany indrindra isika dia hijery izay vaovao izay mampiantrano ny iOS 15, rafitra iray izay nokihana ny dokam-barotra nauseam noho ny tsy fanavaozana ampy, fa manome toky antsika ny fitoniana, ny filaminana ary ny fanamboarana.
FaceTime sy SharePlay
Raha ny FaceTime, tonga ny iray amin'ireo zava-baovao lehibe, Ankehitriny ny rafi-piantsoana horonantsary Apple izay ankafizin'ny mpampiasa azy dia hamela anao hampihetsika a maody fakana sary izany dia hampanjavozavo ny fototry ny antso amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, mifantoka amin'ilay olona, ​​toy ny ataon'ny fampiharana hafa mitovy amin'izany. Ho fanampin'izany, ampiana audio spatial amin'ny antso FaceTima, na dia mbola fantatra tsara hatrany momba izany aza ny tena fampiharana.
Fahaizana manampy fitaovana tsy paoma miantso amin'ny alàlan'ny rohy.
Ho azy SharePlay dia rafitra vaovao ahafahantsika mizara atiny audiovisual amin'ny fotoana tena izy toa ny mozika avy amin'ny Apple Music, andian-tantara na sarimihetsika avy amin'ny serivisy mifandraika amin'izany toa Disney +, TikTok ary Twitch. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mizara ny efijery amin'ny alàlan'ny FaceTime na manararaotra an'ity votoaty ity amin'ny fomba voatahiry.
Safari nohavaozina sy mampiady hevitra
Ny orinasa Cupertino dia nanomboka tamin'ny fanarenana Safari goavambe izay namboarina tamin'ny fandosan'ny betas. Ankehitriny isika dia avela hametraka andian-tabilao mitsingevana toa izay nitranga tamin'ny iPad. Ny sasany amin'ireo fanovana ireo dia mety nofidian'ny mpampiasa mba tsy hanaloka ny zavatra niainany, ary koa ny fampidirana andian-tsarintany sy hitsin-dàlana.
Ity fanavaozana Safari ity dia nitondra fitarainana maro avy amin'ireo mpandinika, noho izany Apple dia nanapa-kevitra ny hanavao ny rafitra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny betas.
Ny sarintany sy ny toetrandro dia nohavaozina
Ny fampiharana Apple Maps dia manohy miasa manolotra fifaninanana vitsivitsy amin'ny Google Maps, Ankehitriny dia hanolotra angona angovo fikarohana bebe kokoa izy ary atiny no ampidirina momba ny làlana sy ny làlan-kalehany.
Toy izany koa ny fampiharana Weather dia hanampy fisehoana an-tsary vaovao mikasika ny fiovan'ny toetr'andro sy ny toe-piainana. Ny rafitra fampandrenesana momba ny fanairana ny rotsakorana dia namboarina ihany koa.
Fomba fampifantohana sy fampisehoana mazava kokoa
El Fomba fampifantohana Hamela anao hametraka fampandrenesana sy fampiharana amin'ny fomba mandaitra mba tsy hanelingelina anay. Tonga amin'ny fiheverana ny kinova mandroso an'ny Aza manelingelina ny maody izay takian'ny mpampiasa maro mandritra ny telefaona maharitra.
Ny mpampiasa dia afaka manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny faniriany na mifikitra amin'ny preset an'ny orinasa Cupertino. Toy izany koa, hamela antsika hikaroka na dia amin'ny sary aza ny Spotlight, ary hiara-hiasa amin'ilay asa Lahatsoratra mivantana izay handika ny lahatsoratr'ireo sary amin'ny fotoana tena izy, ary koa haka azy mba hizara izany na handika azy na aiza na aiza tadiavintsika.
Vaovao kely hafa
Ny fampiharana -tsoratra manampy ny fahaizana mamorona marika sy mitanisa ireo mpampiasa hafa ao anaty naoty.
Ny rindranasa fikarohana izao dia hahafahanao mitady fitaovana na dia maty aza izy ireo.
Takelaka vaovao ao amin'ny fampiharana fahasalamana Ankehitriny dia hahafahantsika mizara ny angona amin'ny ekipa mpitsabo sy ny fitoniana rehefa miasa ny tongotra.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iPadOS 15
Tao amin'ny fantsona YouTube anay dia nohazavainay tamin'ny farany hoe inona ny zava-dehibe ateraky ny iPadOS 15, izay, araka ny fantatrao, dia tsy inona fa kinova somary sarotra kokoa amin'ny iOS 15.
Voalohany, ny iPadOS 15 dia hanitatra ny habeny sy ny fiasan'ny Widgets, mitondra azy ireo amin'ny efijery lehibe, toy ny mitranga amin'ny iOS 15. Toy izany koa, ny rafitra fandaminana amin'ny alàlan'ny tranomboky fampiharana nolovaina tamin'ny iPhone dia tonga amin'ny iPad ihany koa izy io, mijanona maharitra amin'ny faritra faran'izay fohy amin'ny hitsin-dàlana.
Ny ambiny fampidirana toa ny fanavaozana ny fampiharana -tsoratra tonga tany amin'ny iPad ihany koa izy ireo, noho izany indrindra dia hanana vaovao mitovy na kely noho ny ao amin'ny iOS 15 isika, lafiny iray notsikerain'ireo mpandinika sasany manantena zavatra bebe kokoa amin'ny rafitra fiasan'ny iPad.
Fitaovana inona avy no hanavao ny iOS 15 sy iPadOS15?
Amin'ny tranga iOS 15 Saika tsy misy farany ny lisitra, ho fanampin'ny iPhone 13 izay ho tonga manomboka ny 24 septambra ho avy izao:
iPhone SE (taranaka 2)
Amin'ny lafiny iray, iPadOS 15 dia ho tonga amin'ny:
Pad Pro 12,9-inch (faha-5 Gen)
11-inch iPad Pro (taranaka faha-3)
12,9-inch iPad Pro (taranaka faha-4)
11-inch iPad Pro (taranaka faha-2)
12,9-inch iPad Pro (taranaka faha-3)
11-inch iPad Pro (taranaka faha-1)
12,9-inch iPad Pro (taranaka faha-2)
12,9-inch iPad Pro (taranaka faha-1)
iPad (taranaka faha-8)
iPad (taranaka faha-7)
iPad (taranaka faha-6)
iPad (taranaka faha-5)
iPad mini (taranaka faha-5)
iPad Air (taranaka faha-4)
iPad Air (taranaka faha-3)
Ahoana ny fanavaozana ny iOS 15
Azonao atao ny misafidy ny làlan'ny nentim-paharazana, manaraka ireto fotsiny ny fanavaozana ny OTA:
Sokafy ny fampiharana Fikirana ary mankanesa any amin'ilay faritra General.
ao anatin'ny General safidio safidy Fanavaozana ny lozisialy.
Mandrosoa amin'ny fisintomana ary hametraka ho azy.
Raha tianao, azonao atao ny mametraka ny iOS 15 madio tanteraka mba hialana amin'ny karazana lesoka ary manararaotra manao a fikarakarana amin'ny iPhone-nao.
Azonao atao ny manaraka ny dingana kely sy mora navelanay ho anao tao amin'ny lahatsoratray an'ny Actualidad iPhone momba ireo zava-baovao ireo. Izany no zava-drehetra ilainao ho fantatra momba ny iOS 15, izao no fotoana tokony hanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Eto ny IOS 15 sy iPadOS 15, io ihany no tokony ho fantatrao alohan'ny hanavaozana
jellyfish dia hoy izy:
Taorian'ny fanavaozana dia hitako ny balloon mena ao anatin'ny toerana misy ny "fitehirizana iPhone saika feno", fa omeko izy ary tsy miditra, dia mitoetra toy ny taloha ihany. Nofafako efa ho 50GB, manana toerana malalaka aho. Namerina indray aho, ary tsy misy, mbola eo io ary raha manindrona azy aho dia tsy mamily lalana ahy io, ary tsy miala koa io. Misy vahaolana hafa ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny? Misaotra anao
Mamaly an'i Medusa
iPhone 14 misy lavaka ao amin'ny efijery, iPhone 15 misy Touch ID eo amin'ny efijery, iPhone 16 mivalona